Eyona bhokisi yoQeqeshi yoGcino enokugcina izinto ezahlukeneyo nakweliphi na ixesha uMenzi kunye neFektri | Uqalo olude
I-Long Bamboo Technology Group Co., Ltd.
Ibhodi yokusika yoqalo
Ibhodi ye-Bamboo Cheese
Ubume be-bamboo obunganyangekiyo
I-Rack Dish Rack
I-bamboo ebomvu yewayini
Iphepha le-bamboo Holder
Umnini weBamboo Knife
Isiciko sebhokisi yoGcino
Ukugcinwa kunye nentlangano
Inqwelo yokugcina uqalo
Ibhokisi yeTissue Tissue
Bamboo iimpahla yokubeka
Itheyibhile yodonga yoqalo
Uqalo lwezihlangu zoqalo
Isitulo soqalo abantwana
Izitulo zokutya zoqalo
Itheyibhile esongwayo yoqalo
Imveliso yegumbi lokuhlambela
Ibhokisi yogcino bamboo nempompo
Isitya se bamboo
Ukuma kwesityalo soqalo
Izakhelo zemifanekiso yoqalo
Amacwecwe oMsonto woBambo - Amacwecwe oNcinci e-Bamboo
Ibhokisi yoqalo yoxande yokugcina impahla eyahlukeneyo ...
Natural bamboo ibhokisi yokugcina ekhabhathini ungagcina tablewar ...
Itafile yokutyela yendalo / itafile yekhitshi / idesika / meeti ...
I-bamboo yentsimbi ye-spice ye-spice rack-nkqo ithebhu ezimbini ...
Umgangatho ophezulu we-Eco-Friendly Bamboo Stackable Shoe Rack
Ihowuliseyili bamboo yanamhlanje ephathekayo enamavili ...
Ihowuliseyili Esitalini Uhlobo Bamboo yoGcino Incwadi Ubude bethuba ...
Ibhokisi yogcino bamboo inokugcina izinto ezahlukeneyo nangaliphi na ixesha
[Ubungakanani obahlukeneyo]: Le bhokisi yokugcina inokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zobomi bakho, kwaye inokwenziwa ngokweemfuno zakho.
[Iyahlala kwaye iyathandeka]:Uqalo lukhula ngokukhawuleza kwaye luzinzile. Yinto enzima enokusetyenziswa njengetafile, itafile esecaleni kwebhedi, ishelufu yokubonisa kunye nokuhonjiswa kwasekhaya kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokulala, ekhitshini nakwindlu yangasese.
[Iyahlala kwaye iyathandeka]: Uqalo lukhula ngokukhawuleza kwaye luzinzile. Yinto enzima enokusetyenziswa njengetafile, itafile esecaleni kwebhedi, ishelufu yokubonisa kunye nokuhonjiswa kwasekhaya kwigumbi lokuhlala, kwigumbi lokulala, ekhitshini nakwindlu yangasese.
[Kusetyenziswa kwanjani]:Sebenzisa ngokweemfuno zakho; kwigumbi lokulala ungabeka izacholo (ezinje ngeentsimbi zomqala kunye neeringi), kwaye uququzelele izinto zokuthambisa (ezinje ngezikhonkwane zenzipho kunye nelipstick); kwigumbi lokuhlala ungabeka iinaliti, imisonto kunye neepropu; eofisini, ungabeka iipeni, iziqwengana zephepha kunye nokutya. Ekhitshini, ungagcina iibhotile zokunonga, iitafile, iikomityi, konke ukutya okuthandayo okutya-imivalo yamandla okanye iiprotein bar, igranola okanye iibhisikidi ezixutyiweyo, iibhiskiti okanye iibhiskithi, kwaye kulula nokugcina izinto zokubhaka. Inokubekwa kwidrowa okanye kwidesktop.
[Umgangatho ophezulu]:Iibhokisi zokugcina ezikumgangatho ophezulu ezikumgangatho ophezulu zezendalo, zinokuhlaziywa kwaye zihlale ixesha elide, ezinokuthi zithathe indawo yeebhokisi zomthi ezilukhuni kunye neebhokisi zokugcina. Uqalo lunokumelana kwendalo namabala, ivumba kunye neebhaktiriya, kwaye aluyongozi kwindalo esingqongileyo. Ukucoca kulula ngesepha engathathi hlangothi kunye namanzi, kwaye ucocekile ngelaphu elifumileyo; iziphumo ezilungileyo, nceda wome kakuhle
Ubungakanani 230 * 152 * 64mm
Izinto eziphathekayo Uqalo
Ubungakanani beCarton 465 * 240 * 150mm
Ukupakisha Ukupakisha ngokwesiko
Iyalayisha 6PCS / CTN
Intlawulo I-30% TT njengediphozithi, i-70% TT xa kuthelekiswa nekopi ngu-B / L.
Umhla wokuzisa Phinda iodolo yeentsuku ezingama-45, iodolo entsha kwiintsuku ezingama-60
Ubunzima bokuqala Malunga ne-1kg
Ilogo Iimveliso zinokuziswa kwiMphawu yoMntu yokuPhawula
Le bhokisi yendalo yoqalo inokucwangcisa ngokulula iindawo ezincinci okanye iindawo ezixineneyo zasekhitshini kwaye kuthintele ukudideka. Zilungele izinto zokubala, iikhabhathi, iikhabhathi zokugcina ukutya, njl njl. Gcina iikhabhathi zilungelelane kwaye uphelise ukudideka; inokusetyenziselwa lonke usapho, inokusetyenziselwa iiofisi zasekhaya, amagumbi obugcisa, amagumbi okulala, izindlu zangasese, indawo yokuhlamba iimpahla / iindawo zokuphumla eziqhelekileyo kunye neegaraji; zilungele izindlu, amafulethi, amagumbi okulala, iikharavani, iikhabhathi kunye neCamper
Egqithileyo Ibhokisi yokugcina uqalo ngesiciko inokugcina iti kunye neebhegi zekofu
Okulandelayo: I-bamboo Cwangcisa itreyi enamagumbi ama-4
Ibhokisi yoGcino Bamboo (Bamboo lwendalo)
Umququzeleli woKwakha, uQeqeshiso lweKrisimesi olwandisiweyo
Abaququzeleli be-Bamboo Ikhitshi leSilverware ...
Ibhokisi yoqalo lwekhitshi yokugcina imfoloko yecephe ...
Bamboo ekhitshini tableware condiment stora bottle ...
Bamboo Desk Umququzeleli -Mini Bamboo Desk Ityesi ...
No.1 Longtai Park, Xushi Idolophu, Jianyang, Isixeko saseNanping, kwiPhondo laseFujian, China.
Izinto ezintsha- IBhodi yoqalo eFletiweyo
I-Long Bamboo Technology Group Co., Ltd. 20 ...
Ingxelo yemiboniso yoqalo ...
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi.